Tonga ao amin'ny Google Play Music | ny drafitry ny fianakaviana Androidsis
Google Play Music dia mandefa drafitra ho an'ny fianakaviana hatramin'ny olona enina amin'ny $ 14,99
Google dia manao peta-kofehy azy miaraka amin'ireo tolotra vaovao ireo izay tonga amin'ny endrika YouTube Red na YouTube Music ho fomba iray hifaninana mivantana amin'ireo vovonan'ny mpifaninana aminy toa ny NetFlix na Spotify ary koa ny maro hafa. Mitady fomba hanatsarana azy ireo izy mba hahasarotan'ny mpampiasa azy rehefa mila misafidy serivisy ahafahany mitendry karazana mozika rehetra, tsy misy dokambarotra ary afaka manangana drafi-pianakaviana toy ny Apple Music aza. Apple Music dia manana drafitra ho an'ny fianakaviana izay azo ampiasaina mba hitsimbinana dolara be isam-bolana mba hahafahan'ny fianakaviana iray manontolo mahazo ireo toetra tsara sy tombontsoa azo avy aminy.
Ankehitriny dia ny Google Play Music izay natomboka mivantana amin'ireo datin'ny Noely ireo miaraka amin'ny a drafitry ny fianakaviana hatramin'ny olona enina $ 14,99 isam-bolana. Ity drafitra ity dia tonga miaraka amin'ny bonus miaraka amin'ny fananana YouTube Red ho azy maimaimpoana, ankoatry ny fahazoana miditra amin'ny hira 35 tapitrisa avy amin'ny repertoire mozika ananany. Fomba tena tsara ahazoana mifantina mozika tsara indrindra, na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy misy ho an'ny firenena sasany toa an'i Etazonia, Canada, Australia, France, United Kingdom ary Alemana, ka, fotoana fohy, dia halefa bebe kokoa ny serivisy firenena, araka ny fanazavan'i Google ao amin'ny bilaoginy.
1 Ny hevitr'i Google
2 Inona no ilaina mba hidirana amin'ny drafitry ny fianakaviana?
Ny hevitr'i Google
Ny tanjon'ity drafi-pianakaviana ity hatramin'ny mpikambana enina amin'ny $ 14,99 dia ny fahafahan'ny fianakaviana iray manontolo miditra amin'ny mozika ankafizin'izy ireo nefa tsy mila ferana amin'izany. dokam-barotra izay manakana ny fiainana fialam-boly tonga lafatra ary misy izany na iza na iza ao anatin'ny atiny io dia afaka mahazo ny hira tsara indrindra avy amin'ny fanamoriana izay fampiharana ho an'ny Android, iOS ary fitaovana web.
Fotoana mety tsara ho an'ireo mpampiasa izay any amin'ireo firenena ireo ho fanomezana Krismasy sns. afaka miditra amin'ny votoaty mahafinaritra ny tsirairay izay manolotra an'ity serivisy ity miaraka amin'ireo hira an-tapitrisany hoy.
Ity zava-baovao ity dia manatevin-daharana ireo filokana samihafa natombok'i Google toa ny YouTube Red sy YouTube Music. Tsy manadino ny fomba Play Music dia mihanaka amin'ny firenena maro kokoa Toy ny mpampiasa monina any Canada, afaka miditra mozika mivantana izy ireo maimaim-poana. Fanandramana mahaliana iray hafa nataon'i Google ho an'ity serivisy ity ny podcast ka tsikelikely dia manangona serivisy bebe kokoa sy safidy hafa mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao.
Inona no ilaina mba hidirana amin'ny drafitry ny fianakaviana?
Tsotra be ilay zavatra, satria avy amin'ny finday avo lenta na tablette azonao atao izany. ilaina manana fisoratana anarana amin'ny Google Play Music All Access miaraka amin'ny kaonty Gmail sy mpikambana vitsivitsy hizara izany. Ny serivisy dia mitentina $ 14,99 isam-bolana ary ny olon-drehetra amin'ity drafitra ity dia hanana fidirana amin'ny YouTube Red toy ny bonus tsara.
Avy amin'ny sehatry ny fampiharana dia hanana fidirana amin'ny angon-drakitra momba ny serivisy All Access izay aseho azy ny andro manaraka dia tokony ho izy ny fandoavana isam-bolana. Etsy ambany fotsiny isika dia manana safidy manavao ny drafitry ny fianakaviana miaraka amin'ireo mpikambana fanampiny 5.
Avy eo aorian'izay dia hiseho ny drafitry ny fianakaviana ao ny vidiny sy ny isan'ny mpianakavy tafiditra ao afaka mandray anjara izy ireo. Eto dia hiseho ireo varavarankely mahazatra mitatitra ny vola voatahiry, ny fomba fizarana ny fomba fandoavam-bola amin'ireo ao amin'ny drafitra, ny fomba hitantanana ny micropayments ary tokony hampiditra olona azonao atokisana fotsiny ianao.
Ny zavatra manaraka dia ny manampy ireo olona tianay hahazoana ny drafitry ny fianakaviana Google Play Music. IRETO tsy maintsy manana kaonty Gmail izy ireo ary azonao atao ny manamboatra ny hafatra ho tonga rehefa mandray ny mailaka izy ireo. Farany dia hiditra amin'ny fanovana ny drafitra All Access isika amin'ny maody tsirairay mankany amin'ny kaontin'ny fianakaviana miaraka amin'ny bokotra tsotra vitsivitsy.
Mampalahelo fa tsy tonga teto amin'ny firenentsika izy tamin'ny daty manokana toy izay andehanantsika matetika amin'ity karazana serivisy ity manaova hafaliana amin'ny alin'ny Noely na ny faran'ny taona alohan'ny hampiantsoan'ny chime antsika amin'ny fahitalavitra hisotro ny voaloboka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mozika maimaim-poana » Google Play Music dia mandefa drafitra ho an'ny fianakaviana hatramin'ny olona enina amin'ny $ 14,99
Androidsis sy Tu Lotero manome anao fandraisana anjara 1 euro ho an'ny antsapaka ho an'ny jackpot Krismasy
Ahoana ny fomba ahafahana mampiasa paompy indroa hanidiana ny efijery Android sy hamitahana raha tsy mikasika ny bokotrao amin'ny Android-nao